Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kormeeray Hotel Elite (SAWIRRO) | Dhacdo.com
Home Dhacdooyinka Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kormeeray Hotel Elite (SAWIRRO)
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kormeeray Hotel Elite (SAWIRRO)
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir ayaa gelinkii dambe ee maanta kormeer ku tagay Hotel Elite, oo 16-kii bishan ay weerar hubeysan ku qaadeen mintidiinta Al Shabaab.
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay Milkiilaha Hotel Elite ahna Xildhibaan Golaha Shacabka ka tirsan, Cabdullaahi Maxamed Nuur.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa barxadda hotelka kula shaahay Xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Nuur, oo habeenimadii Axada laga soo badbaadiyay hotelkaasi, isagoo ka mid ahaa dadkii ku go’doonsanaa, ee lagu guuleystay in laga soo daad-gureeyo.
Ina Warsame ayaa Xildhibaanka ku tilmaamay inuu yahay ganacsade geesi ah, oo ay ka go’antahay buu yiri in uu hoteelka dib u hawgeliyo.
“Waxaan maanta booqday Hotel Elite oo maalmo ka hor argagixisada Al Shabaab weerareen. Waxaan barxadda hotelka shaah kula cabay Milkiile Xildhibaan Cabdullaahi Maxamad Nuur. waa ganacsade geesi ah oo ay ka go’an tahay in uu hotelka dib u hawlgeliyo, muujiyayna adkeysi iyo in aan loo nuglaan argagixisada.” Ayuu yiri Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir.
Weerarkan ayaa waxaa ku dhintay lix iyo toban qof, oo kow iyo toban ka mida ay yihiin shacabka, halka shanta kalana ay ahayd kuwii weerarka soo qaaday, sida uu sheegay Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Dhamme Sadiiq Aadan Cali (Doodisho).
Nagala soo xiriir dhacdo@mail.com